အသက်မဲ့တဲ့ အသံမဲ့ ခံစားချက်တွေ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » အသက်မဲ့တဲ့ အသံမဲ့ ခံစားချက်တွေ
အသက်မဲ့တဲ့ အသံမဲ့ ခံစားချက်တွေ
Posted by အတိသဉ္ဖာ နာဂရချစ်သူ/ သန်းထွဋ်ဦး on Sep 30, 2011 in Creative Writing |6comments
ခံစားချက်သံစဉ် စာသင်ခုံပေါ်မှာ ဝေးသွားခဲ့ရတဲ့ ကျောင်းကြီး
ကျွန်တော်တို့ မကွေးဆေးကျောင်းရဲ့ စာသင်ဆောင် Gallery တွေထဲက ထိုင်ခုံတွေ၊စာတင်ခုံများ၏အသံမဲ့ခံစားချက်တွေပါ။ဖတ်ကြည့်ပေးကြပါဦး။
ကျောင်းမဖွင့်ခင်ရက်တော်တော်ကြာကတည်းကကျောင်းမြေကိုကျွန်တော်ရောက်နေခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ဟာကျောင်းသားကျောင်းသူ အသစ်လေးတွေနဲ့ 
တွေ့ ရမယ့်ရက်ကိုလက်ချိုးရေတွက်ရင်းစောင့်နေခဲ့ပါတယ်။သူတို့ တွေ ကတက်ကြွလန်းဆန်းနုသစ်နေတဲ့အရွယ်၊လှချင်နေတဲ့အရွယ်ဆိုတော့သူတို့ အနားမှာဆိုရင် ရေမွှေးနံ့ တွေ၊ပေါင်ဒါနံ့ တွေ၊ခေါင်းလိမ်းဆီနံ့ တွေမွှေးကြိုင်နေမှာပေါ့။ဒါပေမယ့် ခုတော့ကျွန်တော်က ကျောင်းဆောင်သစ်ဆောက်လုပ်ရေးသမားကြီးတွေရဲ့ ချွေး
ဒီလိုနဲ့ ဘဲ ကျောင်းဖွင့်တဲ့နေ့ ကိုရောက်လာခဲ့ပါပြီ။ကျွန်တော့်ကိုGallery
ရဲ့ နောက်ဆုံးမှာနေရာချထားပေးလို့ ဝင်လာတဲ့ ကျောင်းသားကျောင်းသူအားလုံးကိုမြင်နေရပါတယ်။
ဟော. ရေမွှေးနံ့ လေးကသင်းနေတာဘဲ။အတော်ဈေးကြီးမယ့်ပုံပဲ။ဒေါက်ဖိနပ်သံလည်းကြားတယ်။ဘုရားသိကြားမ, လို့ အဲဒီ
ကျွန်တော့်ဆုတောင်းလေးမပြည့်ခဲ့ပါဘူး။သူမက ရှေ့တန်းမှာ သွားထိုင်လိုက်လို့ ပါ။
နဲ့ (ခေါင်းမဖီးခဲ့ရဘူးထင်ပါတယ်)။အကျီင်္ီကလည်းကြေလို့ ။မျက်နှာသစ် သွားတိုက်တောင်မနည်းမီအောင်လုပ်ခဲ့ရတဲ့ပုံပေါက်တယ်။ဒီလိုလူမျိုးကိုတော့ကျွန်တော့်အနားမှာမထိုင်စေချင်ပါဘူး။ဒါပေမယ့် ဘသားချောကကျွန်တော့်အနားမှာပဲ ဒုန်းကနဲ ဆောင့်ထိုင်ချလိုက်တယ်။ကျွန်တော့် ကျောတွေရင်တွေတောင်အောင့်သွားသလိုဘဲ။
“အမေတို့ ကလည်း မတက်ချင်ပါဘူးဆိုနေ. အခုတော့အိပ်ရေးပျက်ရပြီ”တဲ့။ဟောဗျာ.
သူ့ ဘဝအတွက် ကောင်းဖို့ လုပ်ပေးတဲ့မိဘကိုပဲအပြစ်တင်နေရသေးတယ်. ။
ဒီလိုနဲ့ ဘဲ ကျောင်းတက်ရက်တွေကိုကျော်ဖြတ်လာခဲ့ရတယ်။စာလိုချင်တဲ့လူတွေက ကျွန်တော့်အနားမှာသိပ်မထိုင်ချင်ကြပါဘူး။မမြင်ရမှာစိုးလို့ တဲ့လေ။နေရာမရမှထိုင်ကြတဲ့လူတွေများပါတယ်။စာကိုသိပ်စိတ်မဝင်စားတဲ့ကောင်လေးတ
ချို့ လည်းကျွန်တော့်အနားမှာရှိလေရဲ့ ။
နှစ်လယ်ပိုင်းကို ကျော်လာတော့ကျွန်တော့်အနားမှာ စည်စည်ကားကားဖြစ်လာပါတော့တယ်။ကျွန်တော့်နေရာဟာအတွဲတွေအများဆုံး ထိုင်တတ်တဲ့နေရာပေါ့။သူတို့ ပျော်မြူးနေတဲ့ချိန်မှာ. ကျွန်တော်လည်းကြည်နူးရပါတယ်။သူတို့ ရန်ဖြစ်ပြီးစိတ်ဆိုးစိတ်ကောက် နေချိန်တွေမှာတော့ ကျွန်တော့်ကိုယ်ပေါ်ကိုဓါးတွေ နဲ့ လှီးကြတယ်။
ခုတော့ ကျွန်တော့်ကိုယ်ပေါ်မှာဒဏ်ရာဒဏ်ချက်တွေ အပြည့်နဲ့ ။ကျွန်တော်လည်း ကျွန်တော့်ကိုယ် ကိုလှစေချင်တာပေါ့။ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်ကပြောလည်းမပြောနိုင်. လုပ်လည်းမလုပ်နိုင်ဆိုတော့. သူတို့ ပြုသမျှနုနေရတာပေါ့——–
နောက်ပြီး. သူတို့ ကဘာရယ် လို့ မှမဟုတ်ဘဲလျှောက်ရေးတဲ့correction ရာတွေကလည်းရှိသေးရဲ့ ။ဒါတွေကိုဘယ်သူတွေကဘယ်လိုပြင်ပေးနိုင်မှာလဲ။ပြင်နိုင်တယ်ဆိုပေမယ့်လည်းနဂိုတိုင်းမှပြန်မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး။
ဒါတွေ ဟာဖြစ်မြဲတရားတွေမို့ ဘယ်သူ့ ကိုမှအပြစ်မတင်ပါဘူး။ဒါပေမယ့်ပြောခွင့်ရရင်. ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့“ကျွန်တော့် အဖြစ်ကိုသနား ပါဗျာ” လို့ ——။
ဒါပေမယ့်ဘယ်လိုမှ စကားပြောလို့ မရတဲ့ဘဝ၊လူတွေကသက်မဲ့လို့ သတ်မှတ်ထားတဲ့ခုံတခုံမို့ ကျွန်တော်ကတော့. ဒီဘဝဒီသံသရာထဲမှဲပဲ ဓါးနဲ့ ထိုးခံ၊correction နဲ့ အရေးခံနေရဦးမှာပါ။——–
ကျောင်းတော်ကြီးကို ခွဲခွါခဲ့ရ ၁၆ နှစ်ကြာမြင့်ခဲ့ရပေပြီ။
ဂျပ်ဆင်ထိပ်က လရိပ်ပြာ နဲ့လည်း အလှမ်းဝေးကွာခဲ့ရသည်။
အဆောင်သူလေးတွေကိုလည်း သတိရ မိနေတော့ချေပြီ။
မျက်ရည်တွေနဲ့ရှင်သန်နေလေရဲ့ ………. ။
သူ့ အဖြစ်ကို သူ
တွေ့ ပြီ တွေ့ ပြီ
oh! I’m not concern Mg Pae in this case.It is my old feelings but it is stiil fresh in my mind,
I think i’ve gotacold.And i’ve gotaheadache. I have gotatemperature.
So i want to see the doctor.
အသက်မဲ့ပေမယ့် စာတင်ခုံလေးနေရာက ဝင်ခံစားပြီး ရေးလိုက်တဲ့ခံစားချက်ဖြစ်သွားတာ
ဟိုး ပထမနှစ်ကျောင်းသားတွေထိ ကျောင်းစာသင်ချိန်ပြေးလိုသူ၊အိပ်ငိုက်လိုသူ တွေက နောက်ဆုံးတန်းကခုံတွေကိုရွေးကြတယ်လေ။အဲဒါလေးကို
သွားသတိရမိလို့ ပါနော်။တခြားတော့ မရှိပါဘူး။